ကမ်ဘာ့ အကွီးဆုံး အငျးဆကျ ၁၀ မြိုး - Thutazone
ကမ်ဘာ့ အကွီးဆုံး အငျးဆကျ ၁၀ မြိုး
ပုရှကျဆိတျ ၊ လိပျပွာ ၊ ခွငျ ၊ ယငျ ၊ ပြား စတာတှဟော ကြှနျတျောတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ အမွဲတစမွေငျတှနေ့ရေတဲ့ အငျးဆကျအမြိုးအစားတှဖွေဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အမြားစု ထငျလရှေိ့တာက အငျးဆကျဆိုရငျ အကောငျငယျပွီး ၁လကျမ ၂လကျမ အရှယျအစားလောကျထိပဲ ရှိနိုငျတယျ ဆိုပွီးတော့ပါ။ တကယျလို့မြား လကျရှိအခြိနျထိ ရှိနဆေဲဖွဈတဲ့ အငျးဆကျတှထေဲမှာ ၂ ပလေောကျ အရှယျအစားရှိတဲ့ အငျးဆကျတှေ ရှိနတေယျ ဆိုတဲ့ မသိတဲ့မိတျဆှမြေား အနညျးငယျ အံသွသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီတခါတော့ ယနအေ့ခြိနျထိ ရှိနဆေဲဖွဈတဲ့ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး အငျးဆကျ ၁၀ မြိုး အကွောငျးကို ဝမြှေလိုကျပါတယျ။
10. Giant Water Bug : up to 12 cm (4.7 in)
ရခြေိုဒသေမှာ ရှငျသနျပေါကျဖှား တတျတဲ့ အငျးဆကျမြိုးဖွဈပွီး သိပ်ပံအမညျက Belostomatidae ဆိုပွီးဖွဈပါတယျ။ Hemiptera အငျးဆကျမြိုးနှယျထဲမှာ အကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ ဒီအငျးဆကျတှကေို ကမ်ဘာ့ဒသေအနှံ့အပွားမှာ တှရေ့တယျဆိုပမေယျ့ မွောကျအမရေိက ၊ တောငျအမရေိက ၊ သွစတွေးလမြွောကျပိုငျး နဲ့ အရှအေ့ာရှဒသေတှမှော အမြားဆုံးတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ စမျးခြောငျးတှေ နဲ့ ရကေနျတှမှော နထေိုငျကကျြစားလရှေိ့ပါတယျ။ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ သူတို့ ခန်ဓာကိုယျ အရှယျအစားဟာ ဝ.၇၅ လကျမခနျ့ရှိတတျပွီး အကွီးဆုံးကောငျတှကေတော့ ၄.၇၅လကျမ အရှယျအစားအထိ ရှိတတျပါတယျ။ ဒီ Giant Water Bug တှကေို အရှတေ့ောငျအာရှဒသေအခြို့မှာတော့ စားသုံးလရှေိ့ကွပါတယျ။
9. Elephant beetle : up to 13 cm (5.1 in)
အရှယျအစားကွီးမားပွီး ဆငျလိုလိုသဏ်ဍာနျရှိတာကွောငျ့ သူတို့ကို ဆငျပိုးတောငျမာ လို့ချေါကွလရှေိ့ပွီး သိပ်ပံအမညျကတော့ Megasoma elephas ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကိုတော့ မက်ကဆီကိုတောငျပိုငျး နဲ့ အလယျအမရေိကဒသေတှမှော အမြားဆုံးတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ အထီးတှရေဲ့ဦးခေါငျးတညျ့တညျ့မှာ ဦးခြိုပါရှိတာကွောငျ့ ကွံ့ပိုးတောငျမာလို့လညျးချေါတတျကွပါသေးတယျ။ ဆငျပိုးတောငျမာ အထီးတှဟော ခန်ဓာကိုယျအလြား ၅.၁ အရှယျအစားထိ ကွီးထှားလရှေိ့ပွီး အမတှကေတော့ အထီးတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ၂ဆ ၃ဆခနျ့ ပိုသေးပါတယျ။
8. Atlas beetle : up to 13 cm (5.1 in)
သူကလညျး အပျေါက ပိုးတောငျမာလိုပဲ ကွံ့ပိုးတောငျမာအမြိုးအစားဖွဈပွီး သိပ်ပံအမညျကတော့ Chalcosoma atlas ဖွဈပါတယျ။ ဂရိဒဏ်ဍာရီလာ တိုကျတနျနတျဘုရား Atlas ရဲ့ အမညျကိုပေးထားတာဖွဈပွီး အကွောငျးကတော့ ဒီကောငျတှဟော ကမ်ဘာပျေါမှာ အသနျမာဆုံးအငျးဆကျအဖွဈ သတျမှတျခံထားရလို့ပါ။ ဘယျလောကျတောငျ သနျမာသလဲဆိုရငျ သူ့ခန်ဓာကိုယျအရှယျအစားထကျ အဆပေါငျးမြားစှာလေးတဲ့ အရာတှကေို ထမျးပိုးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ သူတို့ကိုတော့ တောငျအာရှဒသေမှာတှရေ့လရှေိ့ပွီး အမြားဆုံးတှရေ့တာကတော့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံမှာ ဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအရှယျအစားကတော့ ၂.၅လကျမ ကနေ ၅.၁လကျမအထိ ကွီးထှားကွပါတယျ။
7. Actaeon beetle : up to 13.5 cm (5.3 in)
ဂရိဒဏ်ဍာရီလာသူရဲကောငျး Actaeon ရဲ့အမညျကိုအပေးခံထားရတဲ့ ဒီပိုးတောငျမာတှရေဲ့ သိပ်ပံအမညျကတော့ Megasoma actaeon ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကိုတော့ တောငျအမရေိကတိုကျက ဘိုလီးဗီးယား ၊ ကိုလမျဘီယာ ၊ ဘရာဇီး ၊ အီကှဒေေါ စတဲ့နိုငျငံတှမှော အမြားဆုံးတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ ကွီးမားထူထဲတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဒီပိုးတောငျမာတှကေတော့ ခန်ဓာကိုယျအလြား ၅.၄လကျမအထိ ကွီးထှားနိုငျကွပါတယျ။
6. giant longhorn beetle : up to 15 cm (5.9 in)
အလှနျရှညျလြားတဲ့ ဦးခြိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ပိုးတောငျမာအမြိုးအစားဖွဈပွီး သူတို့ကို giant longhorn beetle လို့ချေါသလို imperious sawyer လို့လညျး ချေါကွလရှေိ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ သိပ်ပံအမညျကတော့ Enoplocerus armillatus ဖွဈပါတယျ။ ဒီဦးခြိုရှညျပိုးတောငျမာတှကေိုတော့ တောငျအမရေိကတိုကျက အာဂငျြတီးနား ၊ ကိုလမျဘီယာ ၊ ပွငျသဈဂီယားနား ၊ ဂိုငျယာနာ စတဲ့နိုငျငံတှမှော အမြားဆုံးတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ ဒီအကောငျတှရေဲ့အရှယျအစားဟာ ၄လကျမခှဲ အရှယျအစားသာ ရှိတတျပမေယျ့ အကွီးဆုံးကောငျတှကေတော့ ၅.၉လကျမ အရှယျအစားထိ ရှိကွပါတယျ။
5. Titan beetle : up to 16.7 cm (6.6 in)
တိုကျတနျပိုးတောငျမာတှဟော အကွီးဆုံးအငျးဆကျအမြိုးအစားတမြိုးဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့ သိပ်ပံအမညျက Titanus giganteus ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကိုတော့ ကမ်ဘာအနှံ့အပွားမှာ တှရေ့တတျပွီး တောငျအမရေိကတိုကျက ဗငျနီဇှဲလား ၊ ကိုလမျဘီယာ ၊ အီကှဒေေါ ၊ ပီရူး နဲ့ ဘရာဇီးမွောကျပိုငျးတို့မှာ အမြားဆုံးတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ အရှယျအစားအားဖွငျ့တော့ တိုကျတနျပိုးတောငျမာတှဟော ခန်ဓာကိုယျအလြား ၆.၆လကျမ အထိ ကွီးထှားနိုငျပါတယျ။
4. Hercules beetle : up to 17 cm (6.7 in)
ဟာကြူလီပိုးတောငျမာကတော့ လူသိအမြားဆုံးပိုးတောငျမာဖွဈပွီး ကွံ့ပိုးတောငျမာတှထေဲမှာတော့ အကွီးဆုံးမြိုးနှယျဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့သိပ်ပံအမညျက Dynastes hercules ဖွဈပွီး သူတို့ဟာ ဟာကြူလီဆိုတဲ့အမညျနဲ့ လိုကျအောငျ သူတို့ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျထကျ အဆ ၁၀၀ကြျောလေးလံတဲ့ အရာတှကေို သယျယူထမျးပိုးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ သူတို့ကို မက်ကဆီကိုတောငျပိုငျး နဲ့ ဘိုလီးဗီးယားနိုငျငံတှကေ တောငျတနျးတှေ မိုးသဈတောတှမှော အမြားဆုံးတှရေ့တတျပါတယျ။ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ အရှယျရောကျပွီးအကောငျတှရေဲ့ အရှယျအစားဟာ ၃.၅လကျမသာ ရှိပမေယျ့ တခြို့အကောငျကွီးတှကေတော့ ၆.၇ လကျမ အထိ ရှိတတျပါတယျ။
3. Sabertooth Longhorn beetle: up to 17+ cm (6.7+ in)
ဒီဦးခြိုရှညျ ပိုးတောငျမာတှရေဲ့ သိပ်ပံအမညျက Macrodontia cervicornis ဖွဈပါတယျ။ Macrodontia က ရှညျလြားတဲ့သှား ၊ cervicornis က သမငျဦးခြို ဆိုပွီး အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ အခွားပိုးတောငျမာတှနေဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျကှဲပွားပါတယျ။ သူတို့ကိုတော့ ကိုလမျဘီယာ ၊ အီကှဒေေါ ၊ ပီရူး နဲ့ ဘိုလီးဗီးယားက မိုးသဈတောတှမှော အမြားဆုံးတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ ဒီအကောငျတှရေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအရှယျအစားကတော့ ၇လကျမနီးပါးအထိ ရှိတတျပါတယျ။
သူတို့ကိုတော့ ကြှနျတျောတို့က ဒါးခုတျကောငျ ၊ ရှိခိုးကောငျ စသညျဖွငျချေါတတျကွပွီး သိပ်ပံအမညျက Mantodea ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကို ကမ်ဘာ့နရောအနှံ့အပွားမှာ တှရေ့လရှေိ့ပွီး ပုံမှနျအရှယျအစားကတော့ ၂လကျမကနေ ၃လကျမ အရှယျအစားအထိ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၁၉၂၉ ခုနှဈတုနျးက တရုတျပွညျတောငျပိုငျးမှာ တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ရှိခိုးကောငျရဲ့အရှယျအစားကတော့ ၇လကျမ အထိတောငျ ရှိလို့နပေါတယျ။
1. Phryganistria chinensis Zhao: 62.4 cm (24.6 in)
ကမ်ဘာပျေါမှာ အကွီးဆုံး အငျးဆကျကတော့ တုတျခြောငျးအငျးဆကျအမြိုးအစားဖွဈပွီး သိပ်ပံအမညျကတော့ Phryganistria ဖွဈပါတယျ။ တုတျခြောငျးအငျးဆကျတှကေိုတော့ အန်တာတိကတိုကျက လှဲလို့ ကမ်ဘာ့နရောအနှံ့အပွားမှာ တှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ တုတျခြာငျးအငျးဆကျတှဟော လကျမဝကျကနေ ၂ပေ ဝနျးကငျြအထိ အရှယျအစားအမြိုးမြိုး ရှိကွပါတယျ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈ တရုတျနိုငျငံအနောကျပိုငျးမှာရှိတဲ့ အငျးဆကျပွတိုကျမှာတှခေဲ့ရတဲ့ တုတျခြောငျးအငျးဆကျကတော့ ခန်ဓာကိုယျအလြား ၂၄.၆လကျမ အထိ ရှိနတောကွောငျ့ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး အငျးဆကျအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
Ref: Our Planet Web
—— ——- ———-
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး အင်းဆက် ၁၀ မျိုး
ပုရွက်ဆိတ် ၊ လိပ်ပြာ ၊ ခြင် ၊ ယင် ၊ ပျား စတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲတစေမြင်တွေ့နေရတဲ့ အင်းဆက်အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အများစု ထင်လေ့ရှိတာက အင်းဆက်ဆိုရင် အကောင်ငယ်ပြီး ၁လက်မ ၂လက်မ အရွယ်အစားလောက်ထိပဲ ရှိနိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့ပါ။ တကယ်လို့များ လက်ရှိအချိန်ထိ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ အင်းဆက်တွေထဲမှာ ၂ ပေလောက် အရွယ်အစားရှိတဲ့ အင်းဆက်တွေ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ မသိတဲ့မိတ်ဆွေများ အနည်းငယ် အံသြသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ယနေ့အချိန်ထိ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အင်းဆက် ၁၀ မျိုး အကြောင်းကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ရေချိုဒေသမှာ ရှင်သန်ပေါက်ဖွား တတ်တဲ့ အင်းဆက်မျိုးဖြစ်ပြီး သိပ္ပံအမည်က Belostomatidae ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Hemiptera အင်းဆက်မျိုးနွယ်ထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီအင်းဆက်တွေကို ကမ္ဘာ့ဒေသအနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရတယ်ဆိုပေမယ့် မြောက်အမေရိက ၊ တောင်အမေရိက ၊ သြစတြေးလျမြောက်ပိုင်း နဲ့ အရှေ့အာရှဒေသတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ စမ်းချောင်းတွေ နဲ့ ရေကန်တွေမှာ နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် သူတို့ ခန္ဓာကိုယ် အရွယ်အစားဟာ ဝ.၇၅ လက်မခန့်ရှိတတ်ပြီး အကြီးဆုံးကောင်တွေကတော့ ၄.၇၅လက်မ အရွယ်အစားအထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီ Giant Water Bug တွေကို အရှေ့တောင်အာရှဒေသအချို့မှာတော့ စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
အရွယ်အစားကြီးမားပြီး ဆင်လိုလိုသဏ္ဍာန်ရှိတာကြောင့် သူတို့ကို ဆင်ပိုးတောင်မာ လို့ခေါ်ကြလေ့ရှိပြီး သိပ္ပံအမည်ကတော့ Megasoma elephas ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ မက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်း နဲ့ အလယ်အမေရိကဒေသတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အထီးတွေရဲ့ဦးခေါင်းတည့်တည့်မှာ ဦးချိုပါရှိတာကြောင့် ကြံ့ပိုးတောင်မာလို့လည်းခေါ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဆင်ပိုးတောင်မာ အထီးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၅.၁ အရွယ်အစားထိ ကြီးထွားလေ့ရှိပြီး အမတွေကတော့ အထီးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ၂ဆ ၃ဆခန့် ပိုသေးပါတယ်။
သူကလည်း အပေါ်က ပိုးတောင်မာလိုပဲ ကြံ့ပိုးတောင်မာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သိပ္ပံအမည်ကတော့ Chalcosoma atlas ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ တိုက်တန်နတ်ဘုရား Atlas ရဲ့ အမည်ကိုပေးထားတာဖြစ်ပြီး အကြောင်းကတော့ ဒီကောင်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသန်မာဆုံးအင်းဆက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရလို့ပါ။ ဘယ်လောက်တောင် သန်မာသလဲဆိုရင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားထက် အဆပေါင်းများစွာလေးတဲ့ အရာတွေကို ထမ်းပိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ တောင်အာရှဒေသမှာတွေ့ရလေ့ရှိပြီး အများဆုံးတွေ့ရတာကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကတော့ ၂.၅လက်မ ကနေ ၅.၁လက်မအထိ ကြီးထွားကြပါတယ်။
ဂရိဒဏ္ဍာရီလာသူရဲကောင်း Actaeon ရဲ့အမည်ကိုအပေးခံထားရတဲ့ ဒီပိုးတောင်မာတွေရဲ့ သိပ္ပံအမည်ကတော့ Megasoma actaeon ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ တောင်အမေရိကတိုက်က ဘိုလီးဗီးယား ၊ ကိုလမ်ဘီယာ ၊ ဘရာဇီး ၊ အီကွေဒေါ စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ကြီးမားထူထဲတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဒီပိုးတောင်မာတွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၅.၄လက်မအထိ ကြီးထွားနိုင်ကြပါတယ်။
အလွန်ရှည်လျားတဲ့ ဦးချိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပိုးတောင်မာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သူတို့ကို giant longhorn beetle လို့ခေါ်သလို imperious sawyer လို့လည်း ခေါ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သိပ္ပံအမည်ကတော့ Enoplocerus armillatus ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဦးချိုရှည်ပိုးတောင်မာတွေကိုတော့ တောင်အမေရိကတိုက်က အာဂျင်တီးနား ၊ ကိုလမ်ဘီယာ ၊ ပြင်သစ်ဂီယားနား ၊ ဂိုင်ယာနာ စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဒီအကောင်တွေရဲ့အရွယ်အစားဟာ ၄လက်မခွဲ အရွယ်အစားသာ ရှိတတ်ပေမယ့် အကြီးဆုံးကောင်တွေကတော့ ၅.၉လက်မ အရွယ်အစားထိ ရှိကြပါတယ်။
တိုက်တန်ပိုးတောင်မာတွေဟာ အကြီးဆုံးအင်းဆက်အမျိုးအစားတမျိုးဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ သိပ္ပံအမည်က Titanus giganteus ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရတတ်ပြီး တောင်အမေရိကတိုက်က ဗင်နီဇွဲလား ၊ ကိုလမ်ဘီယာ ၊ အီကွေဒေါ ၊ ပီရူး နဲ့ ဘရာဇီးမြောက်ပိုင်းတို့မှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အရွယ်အစားအားဖြင့်တော့ တိုက်တန်ပိုးတောင်မာတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၆.၆လက်မ အထိ ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။
ဟာကျူလီပိုးတောင်မာကတော့ လူသိအများဆုံးပိုးတောင်မာဖြစ်ပြီး ကြံ့ပိုးတောင်မာတွေထဲမှာတော့ အကြီးဆုံးမျိုးနွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သိပ္ပံအမည်က Dynastes hercules ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ဟာကျူလီဆိုတဲ့အမည်နဲ့ လိုက်အောင် သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထက် အဆ ၁၀၀ကျော်လေးလံတဲ့ အရာတွေကို သယ်ယူထမ်းပိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကို မက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်း နဲ့ ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံတွေက တောင်တန်းတွေ မိုးသစ်တောတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးအကောင်တွေရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ၃.၅လက်မသာ ရှိပေမယ့် တချို့အကောင်ကြီးတွေကတော့ ၆.၇ လက်မ အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီဦးချိုရှည် ပိုးတောင်မာတွေရဲ့ သိပ္ပံအမည်က Macrodontia cervicornis ဖြစ်ပါတယ်။ Macrodontia က ရှည်လျားတဲ့သွား ၊ cervicornis က သမင်ဦးချို ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အခြားပိုးတောင်မာတွေနဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကွဲပြားပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ကိုလမ်ဘီယာ ၊ အီကွေဒေါ ၊ ပီရူး နဲ့ ဘိုလီးဗီးယားက မိုးသစ်တောတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအကောင်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကတော့ ၇လက်မနီးပါးအထိ ရှိတတ်ပါတယ်။
သူတို့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒါးခုတ်ကောင် ၊ ရှိခိုးကောင် စသည်ဖြင်ခေါ်တတ်ကြပြီး သိပ္ပံအမည်က Mantodea ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ပုံမှန်အရွယ်အစားကတော့ ၂လက်မကနေ ၃လက်မ အရွယ်အစားအထိ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၂၉ ခုနှစ်တုန်းက တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရှိခိုးကောင်ရဲ့အရွယ်အစားကတော့ ၇လက်မ အထိတောင် ရှိလို့နေပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး အင်းဆက်ကတော့ တုတ်ချောင်းအင်းဆက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သိပ္ပံအမည်ကတော့ Phryganistria ဖြစ်ပါတယ်။ တုတ်ချောင်းအင်းဆက်တွေကိုတော့ အန္တာတိကတိုက်က လွဲလို့ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ တုတ်ချာင်းအင်းဆက်တွေဟာ လက်မဝက်ကနေ ၂ပေ ဝန်းကျင်အထိ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အင်းဆက်ပြတိုက်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ တုတ်ချောင်းအင်းဆက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၂၄.၆လက်မ အထိ ရှိနေတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အင်းဆက်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။